कति वाच्ने तपाईको यौन क्षमताले बताउँछ ? — KhabarTweet
कति वाच्ने तपाईको यौन क्षमताले बताउँछ ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १०, २०७३ समय: १०:१२:५०
एजेन्सी । बेडरुममा पुरुषले आफ्नो पुरुषत्व प्रदर्शन गर्न सकेन भने मानिसको दाम्पत्य जीवनमा असर गर्छ भन्ने भनाई अब नयाँ रहेन । तर कम उत्तेजित हुने मानिसको आयुमा समेत असर गर्ने नयाँ तथ्य भेटिएको वैज्ञानिकहरुले दाबी गरेका छन् । कम उत्तेजित हुने पुरुषमा छिट्टै मृत्यु हुने ७० प्रतिशत सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
इरेक्टाइलट डाइफंक्सन (इडीं) ले हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेन्सन, अत्यधिक माटोपन, चिनिरोग, धुमपान गर्ने मानिसहरुमा देखिएको उनीहरुले बताउने गरेका थिए । उत्तेजित नहुने मानिसमा स्टोक र मुटुका धमनीसँग सम्बन्धित रोग लाग्ने गरेको बताइने गरिएको थियो ।
कहिलेकाहीँ सक्षम वा कहिल्यै पनि सक्षम नभएका व्यक्तिहरुको यौन क्षमता ‘असन्तुलन’ भएको बताइएको थियो । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५ सय ५७ जनामा उत्तेजना नहुने अर्थात इडी भएको बताएका थिए । ८ वर्षसम्मको नियमित उपचारपछि इडी भएका २ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएकामध्ये ६१ जनामा मुटुसँग सम्बन्धित रोग, ६४ जनामा ट्युमर, १२ जनामा श्वासप्रश्वासम्बन्धि समस्या र बाँकीमा अन्य अनगिन्ति समस्याहरु देखिएका थिए । इडीबाट पीडित सहभागीहरुमा औषत आयु ७० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उनीहरुले निस्कर्ष निकालेका थिए । अध्ययन जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित छ । ९स्वास्थ्य खबरपत्रिका०